Waxaan lahaa Mark on my Martech Zone Wareysiyada Podcast, wuxuu kula kulmay munaasabad, saaxiibtinimaduna waa weynaatay. Isagu waa saaxiib wanaagsan inuu yeesho, isaga oo aan ku qanacsanayn qaabkiisa si uu kuu maqlo waxaad u baahan tahay. Waxaan iskaashi ka sameynay Nalalka Dell Podcast halka Mark iyo Dell ee B2B Saameynta Saameynta & Abuurista Mawduucyada, Konstanze Alex, ay u arkeen fursad ay ku iftiiminayaan hibada cajiibka ah ee Dell Technologies ay ku hoos leedahay astaamahooda. Weligay maan samayn taxane podcast sidan ah oo Mark ayaa igu riixay inaan ka caawiyo cilmi baarista oo aan soo saaro riwaayad la yaab leh. Marnaba isaga ma bixin karo isaga oo fursad iga helay!
Hagaag, hadda waan xiiseynayaa oo durba waan kafeegayaa tusmada, qaamuuska, iyo bogagga calaamadeysan. Iyo, sidaan u rogayo buugga, waxaan ka helayaa qoraalkan cajiibka ah, ee shaqsi saxeexan ee Mark:
Macmiil cusub oo aan leeyahay ayaa i weydiiyay xeelad ay dejinayaan. Kooxda iibintoodu waxay aqoonsan doontaa rajada, waxay ka heli doontaa cinwaankooda emayllada dhinacyada saddexaad, waxayna si otomaatig ah emayllo hordhac ah ugu soo diri doonaan iyaga. Waxay ii sheegeen inay ka walaacsan yihiin heerarka gujinaya ee hooseeya iyo wax soo saarkooda guud. Waxaan u sheegay inay ahaadaan… oo ay u baahan yihiin inay joojiyaan been abuurka shirkadahaas. Waxay kala fogeynayeen rajada, oo ayan jeclayn.
Mark-muujinta Mark, tani waa Xeer # 1:
Kaliya waxaan marayaa badh Kacdoonka Suuq geynta, laakiin markaan lahadlayo, hada waan fahmay sababta uu ugu jecelyahay muhiimada buugan. Cilmi-baarista, fikradaha, iyo daraasadaha kiisku waa inay ruxaan aasaaska gabi ahaanba cashar kasta oo lagaa riixay tobannaankii sano ee la soo dhaafay.
Aad baan ugu mahad naqayaa inaan u yeedho Mark saaxiib oo gabi ahaanba kugula taliyo inaad si dhakhso leh u soo qaadatid buuggan. Waxaad awoodi doontaa inaad saameyn degdeg ah ku yeelato dadaallada suuqgeyntaada.